Top 10 Ga-enwerịrị iPhone Photo Apps | Martech Zone
Top 10 Ga-enwerịrị iPhone Photo Apps
Satọdee, Nọvemba 17, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Adịghị m nnukwu foto ma na-agba ọsọ ọkachamara igwefoto bụ ụzọ karịrị isi m, n'ihi ya, m na-aghọ aghụghọ ule dị nnọọ ntakịrị site na iji m iPhone na ụfọdụ ọkacha mmasị ngwa. Site na ahia ahia, ịnye foto na ọrụ anyị na-arụ, ebe ndị anyị na-eleta, na ndụ anyị na-ebi na-agbakwụnye ọkwa nghọta nke ndị ahịa na ụmụazụ anyị
Iso ndi obodo anyi no, foto aburula isi. Aga m agba ụlọ ọrụ ọ bụla ume ka ndị ọrụ ha kesaa! Nke a bụ mmebi nke ngwa iPhone kachasị amasị m.
Ee, amaara m na igwefoto na-abịa na iOS mana nhọrọ iji were onyonyo panoramic dị ịtụnanya. Iji see foto panoramic, pịa bọtịnụ nhọrọ mgbe igwefoto gị mepere. Nke a bụ foto m sere na egwu m gara ebe na-adịbeghị anya.
Ọ dịghị ọzọ foto ngwa-eme ka ọ dị mfe ịkọrọ oyiyi mmadụ. Enwere m mmasị na m nwere ike ịkwanye foto ozugbo na Twitter, Facebook na Foursquare site na Instagram kama ịchụ nta na ịchọta foto ndị ahụ na ngwa ndị ọzọ. Ewubere na ikike itinye ihe nzacha na ihe nlere anya nwere ike ime ka ị dị ka pro!
Enwere ụfọdụ atụmatụ igwefoto dị iche iche anaghị ekwe ka nke ahụ na-atọ ụtọ, dị ka ịtinye oge na ịse foto. Igwefoto + nwere ụfọdụ ngwa ọrụ dị egwu iji nyere gị aka nyocha, lekwasị anya ma gbakwunye nghọta na foto ị na-ese, yana ike ịhazi ha. Ọ bụ pro toolset wuru maka onye na-amu amu!
Grid Lens na-enye gị ohere were mkpokọta foto ma jikọta ha n'otu onyonyo. Nwere ike ịhọrọ ma hazie nhazi, wee were foto ọ bụla site na ịpị ebe ahụ, wee chekwaa, kesaa ma ọ bụ zitere email ozi ahụ. Nke a na-eme ka ịkekọrịta obere mkpokọta dị mfe ma dịkwa mfe!
ColorSplash na-enye gị ohere iwepu agba na akụkụ nke foto ị were. Ngwa a dị mfe iji - gbasaa foto ma dọrọ mkpịsị aka gị ebe ịchọrọ ihichapụ agba. Ihe oyiyi ahụ gwụchara nwere ike ịdị ịtụnanya - nke a bụ nwa m nwoke na enyi ya nwanyị na-agba egwu.
You nwetụla foto nwere ịrịọ nkọwa? Nke ahụ bụ ihe N'ime n'ihi na… na-enye a n'ezie jụụ navigation ụzọ na-enye gị ohere tinye a fancy caption ka foto gị na a nkeji.
Snapseed awade ụfọdụ na-akpali nzacha na ọkọlọtọ edezi ngwaọrụ maka ihe oyiyi gị. Njedebe a na-ejedebe nwere nnukwu ọmarịcha na njiri ike dị mma.
Blender na-eme naanị ihe ọ na-ekwu says na-ekwe ka ikike ịgwakọta ọtụtụ ihe oyiyi ọnụ. A bụ ihe a ngwakọta nke Chicago… ụgbọala n'ime obodo na-achọ ala na ya.
Kwadoro site na Natal Okonkwo, Amaghịdị m na Aviary nwere ngwa iOS. Ihe isi ike bụ na m na-ekpori ndụ ngwa iPhone dị mma karịa ụdị weebụ! Aviary nwere ọtụtụ atụmatụ, mana nwekwara akwụkwọ mmado nwere ike iji tinye callouts (ma ọ bụ afụ ọnụ) na ihe oyiyi gị.
Photoshop Express maka iPhone
Nkwado ọzọ sitere na Nat na nke m gaara etinye… Photoshop Express. Ọkachamara ọkachamara ị nwere ike nweta site na Photoshop Express nwere ike ịdị na ụfọdụ ngwaọrụ ndị ọzọ dị n'elu, mana ịdị mfe iji dị egwu. Tinye ihe nzacha, okpokolo agba na nsonaazụ maka ntakịrị karịa ma ị nwetara nnukwu ụlọ mmezi foto.
You nwere ngwa ọ bụla iPhone ndị ọzọ bara nnukwu uru?
Tags: blenderigwefoto +agba agbaokporo oghereImageoyiyiiphonen'eluphotosFotogbajiri
Iwu 36 nke Social Media
Etu esi ewu ulo ahia gi
Nov 17, 2012 na 1:56 PM
Aviary. Ihe niile gbasara onye meere meme. Ma ọ nwere ngwa ngwa na ịzigharị ngwa ngwa mana ezigbo ihe dị mma banyere ya bụ na ọ nwere syndication. Facebook, twitter, flicker… n'otu oge. Ihe fọrọ nke nta ka ọ dị jụụ dị ka nke Instagram
Ugbu a, nke mbụ n’ime ndị ahụ hapụrụ m ka m tinye aka na Facebook peeji nke ad google gbakwunyere WINS!
Nov 17, 2012 na 2:09 PM
Na-atọ ụtọ! Amaghịdị m na ha nwere ngwa mkpanaka!
Nov 18, 2012 na 3:10 AM
Ee. ọ mara ezigbo mma. Ngwa akwụ ụgwọ, mana maka onye na-eme meme na ntinye ederede ọ enweghị ọnụ. Ọzọkwa Photoshop Express na InstaPicFrame ndị dị mma. Aviary nwere nke kacha mma.
Dec 29, 2012 na 10:40 PM
Lelee ngwa ọhụrụ iPhoneography anyị, Hipsta Hipster Cam na http://www.hipster-camera.com Anyị na-eche na anyị nwere ntụgharị mara mma mara mma na ngwa eserese foto iphone site na ịnwe ọnụọgụ mbido na-akparaghị ókè nke emere na ada.
Mar 11, 2013 na 1: 16 PM
Echere m na onye edemede ahụ chefuru itinye 'Zitrr Camera'. Echere m na ọ dị mma karịa igwefoto + ma ọ bụ Instagram…, ụfọdụ ngwa ebe a adịghị mma: /
Apr 4, 2013 na 2: 49 AM
Ngwa ngwa! Ma ị kwesịrị ị na-elele Auto Colorize Pro
Instafusion Top iPad Photo-edezi égwu !!! Instafusion bụ ngwa kachasị edezi foto na ngwa egwu dị egwu iji dezie foto na iPhone !!!
Feb 26, 2014 n’elekere 6:46 nke abali
ọkacha mmasị m bụ ngwa ngwa
Apr 6, 2015 na 8: 50 PM
You hụla Sweet Pix ma! Ezigbo echiche.